Toban Sano Ka Hor Lionel Messi Iyo Kooxda Arsenal? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Markii Barcelona ay halis ugu jirtay inay guuldaro kala kulanto Arsenal xilli ciyaareedkii 2009-10 wareega quarter-finalka Champions League, Lionel Messi sida had iyo jeer uu sameeyo ayaa ciyaartii madaxa saartay.
Isniinta ayaa u dabaaldegeysa 10 sano tan iyo markii uu Messi ciyaartaas ka qaatay Arsenal qoorta, waxaana uu soo saaray mid ka mid ah qaab ciyaareedyadii uu soo bandhigay.
Xiddiga reer Argentina ayaa afar jeer qaaday Champions League afar jeer waana ciyaaryahanka labaad ee ugu goolasha badan taariikhda tartankan isagoo fadhiya 14 gool oo ka sarreeya hogaamiyaha abid ee Cristiano Ronaldo oo dhaliyay 128 gool, Waxaan dib u eegaynaa qaar ka mid ah qaab ciyaareedkii ugu fiicnaa ee Messi ee Champions League
April 6 sanadkii 2010 kulankii Barcelona 4-1 Arsenal (6-3 agg)
Ka dib markii ay ka soo laabteen labo gool oo ay ku kala baxeen barbaro 2-2 ah lugtii hore ee ka dhacday Emirates Stadium, Nicklas Bendtner ayaa hogaanka u sii dheereeyay Arsenal markii ugu horeysay ciyaarta ka dib 19 daqiiqo oo ciyaarta lagu soo celiyay Camp Nou.
Messi ayaa xaqiijiyey inay aheyd Barcelona oo u gudubtay semi-finalka, in kastoo.
Waxa uu kubad si qurux badan u dhameystiray Manuel Almunia labo daqiiqo ka dib isagoo baas ka helay Pedro si uu shabaqa dhex dhigo.
Gool cajiib ah oo uu ka helay Almunia ayaa siiyay seddexleey gooldhalinta ka hor inta uusan nasiin qeybtii labaad, wuxuuna 4-1 ku dubtay guushii afaraad ee isku xigta ka dib markii goolhayaha Arsenal uu joojiyay dadaalkiisa bilowgii dhamaadka orodka fiican.
April 27 Sanadkii 2011 Kulankii Real Madrid 0-2 Barcelona?
Semi-finalka El Clasico waxa uu sameeyay rajo afka laga qabo, dabcan, Messi ayaa soo gaarsiiyay masraxa.
Ma jiro liis ah goolashiisa ugu weyn ee dhameystiraya hadii uusan goolkiisii ​​labaad ka dhalin kooxda ay xafiiltamaan Madrid. Hal iyo labo Sergio Busquets ayaa u sahashay inuu si xor ah ula tartamo Lassana Diarra wuxuuna kubad u helay inuu ka boodo Sergio Ramos iyo Raul Albiol.
Kadib wuxuu ku hor orday dhanka hore Marcelo wuxuuna kubad ka dhex tuuray Iker Casillas si uu u aamusiyo Santiago Bernabeu.
Barbar dhac 1-1 ah lugta labaad ayaa u diray Barcelona finalka finalka iyagoo wajahaya Manchester United…
28 March Sanadkii 2011 Barcelona 3-1 Manchester United?
Ku celcelintii finalka 2009, natiijada ka dhacday Wembley waa isku mid.
Messi ayaa sababay dhibaatoyinka Rio Ferdinand iyo Nemanja Vidic oo ciyaarta laga saaray, iyadoo ciyaartu ay ku dhamaatay barbaro 1-1 ah ka dib markii Wayne Rooney uu kansalay goolkii furitaanka ee Pedro, wuxuu helay gadaal sagaalkii daqiiqo markii ay socotay qeybtii labaad.
Ka dib markii uu si qoto dheer uga soo degay booska weerarka dhexe, waxa uu baas ka helay Andres Iniesta oo hore u maray ka hor inta uusan kubad darbo xoog leh u gelin geeska midig hoose.
David Villa ayaa dhameystiray gooldhalinta iyadoo Barca ay ku soo baxday kaalinta ugu sarreysay markale kooxda Alex Ferguson.
March 7 Sanadkii 2012 Kulankii Barcelona 7-1 Bayer Leverkusen
Leverkusen ayaa ku jirtay soo afjarida rikoorka gooldhalinta ugu weyn ee shaqsiyadeed taariikhda Champions League.
Messi ayaa noqday xiddigii ugu horreeyay ee shan gool dhaliya hal kulan tartamada yurub, isagoo qibrad u leh Camp Nou isagoo soo bandhigay qaab ciyaareed aad u sareeya lugta labaad ee wareega 16ka.
Waxa uu helay kubad laadlaad ah isagoo baas ka helay Xavi oo dhaafsiisan Bernd Leno, halka kii labaad uu ku yimid qaab ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa – isagoo kubad ka laaday diilinta midigta isla markaana darbad lugtiisa bidix ku toogtay.
Ka dib kubado cajiib ah oo uu dhaliyay seddexleydiisa daqiiqadii 49aad, baas cajiib ah oo uu sameeyay Pedro ayaa ka sii horeysay qalad uu ka helay Leno kaasoo Messi u istaagay inuu ciqaabo.
Ciyaar qabow oo 18-yaard ah ayaa ka hartay tababare Pep Guardiola isagoo wejiga ka yaabiyay. Wuxuu goob joog u ahaa wax qabad da’daasi.
May 6 Sanadkii 2015 Kulankii Barcelona 3-0 Bayern Munich?
Guardiola oo ku soo laabanaya Camp Nou isaga oo ah tababaraha Bayern ayaa ahaa sheekada weyn ka hor laadadka, laakiin Messi ayaa ahaa mawduuca kaliya ee laga wada hadlo ka dib guushii ugu dambeysay.
Waxay qaadatay 77 daqiiqo inuu Messi helo gooldhalinta, seddexdiisa daqiiqo ee labaad ka dib waxay u eg tahay inay weli sii bixin doonto rikoodhe Jerome Boateng
Waxa uu u diray ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka Boateng isagoo gudaha iyo gadaal ka riixaya dhinaca midig ee diilinta ganaaxa. Kadib wuxuu u soo diray digniin cajiib ah Manuel Neuer.
Si uu wax uga tuuro Messi ayaa quudiyay Neymar markii uu celiyay seddexleey daqiiqadii 94aad, Barca ayaa sidoo kale finalka garaacday Juventus isla markaana hanatay koobka.